ဘောလုံးကလောင်ရှင်များ အစည်းအရုံး (FWA) မှ ပေးအပ်သည့် တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို လီဗာပူးလ်အသင်းခေါင်းဆောင် ဟန်ဒါဆင်ရရှိ
ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့် လီဗာပူးလ်ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျော်ဒန်ဟန်ဒါဆင်ဟာ ဘောလုံးကလောင်ရှင်များအစည်းအရုံးမှ ပေးအပ်သည့် တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ဆွတ်ခူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဒါဆင်ဟာ ဇူလိုင်လအစောပိုင်းမှာ ဒူးဒဏ်ရာပြသာနာကြောင့် ပွဲအနည်းငယ်ကို လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် မဲစနစ်အရ မဲအများဆုံးကိုရရှိခဲ့ကြောင်း FWA မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ FWA ရဲ့ ကစားသမားစာရင်းထဲမှာတော့ ဟန်ဒါဆင်အပြင် လီဗာပူးလ်အသင်းမှ နောက်ခံလူ ဗန်ဒိုက်၊ အယ်လီဆွန်၊ အာနိုးလ် နှင့် မာနေးလ်တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပြိုင်ဘက်အသင်းများဖြစ်သည့် မန်ချက်စတာစီးတီး နှင့် မန်ယူနိုက်တက်အသင်းတို့မှ ဒီဘရိုင်းနှင့် ရက်ရှ်ဖို့ဒ်တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီဆုကို ရရှိခဲ့သည့်အတွက် ဟန်ဒါဆင်က ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း နှင့် ဂုဏ်ယူမိကြောင်း ပြောခဲ့ပါတယ်။ “ကျွန်တော့်ကို အားပေးပြီးတော့ မဲပေးခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဒီဆုရဲ့ အရင်ရခဲ့ဖူးတဲ့သူတွေကို ကြည့်မယ်ဆိုရင် လီဗာပူးလ်အသင်းမှာ ကစားသွားခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေ...
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ ဖလားတစ်လုံးရဖို့ ထိုက်တန်ပါတယ် #ဒေးဗစ်လုဇ်
ဝါရင့်နောက်ခံလူ ဒေးဗစ်လုဇ်က အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို FA ဖလား ဆီမီးဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာ အူဘာမီယန်း၏ သွင်းဂိုး ၂ ဂိုးဖြင့် အနိုင်ယူခဲ့ပြီးနောက် ယခုရာသီမှာ ဖလားတစ်လုံးရဖို့ ထိုက်တန်မှုရှိပါတယ်လို့ ဖွင့်ဟပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာတော့ ဒေးဗစ်လုဇ်ကိုယ်တိုင် အမှားမရှိအောင် ကစားခဲ့သလို၊ တိုက်စစ်မှူး အူဘာမီယန်းကို ချိတ်ဆက်ပြီး အရေးပါသည့် ပေးပို့မှုများ (Dead Pass) များကို ပေးပို့ကာ ပံပိုးကူညီပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်လက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကို ဒေးဗစ်လုဇ်၏ အမှားနှင့်အတူ အဝေးကွင်းမှာ ၃ ဂိုးပြတ်အရေးနိမ့်ခဲ့သော်လည်း ယခုပွဲမှာတော့ အကောင်းဆုံးကစားကွက်အခင်းအကျင်းနဲ့အတူ ယခင်အရှုံးကို လက်စားချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းဟာ ဖိုင်နယ်အဆင့်ကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး တဖက်မှာ ချယ်လ်ဆီး Vs မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တို့ပွဲစဉ်က အနိုင်ရတဲ့ အသင်းနဲ့ သြဂုတ်လ ၁ရက်နေ့မှာ ဖလားသိမ်းပွဲကိုကစားဖို့ စောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိပါတယ်။ “ဒီရာသီမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကို ကစားရတော့မယ်။ ဒီအသင်းအတွက်...
လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်အပြီးမှာ ပြိုင်ဘက်အသင်းကို မသိမသာ ထိုးနှက်သွားခဲ့သည့် စပါးစ်နည်းပြ #မော်ရင်ဟို
ပရီးမီးယားလိဂ် ပထမအကျော့က အမ်းမရိတ်မြေမှာ အနိုင်မရရှိခဲ့တဲ့ စပါးစ်အသင်းဟာ ယခုတကြိမ်မှာတော့ ရတဲ့အခွင့်အရေးကို အပိုင်အသုံးချပြီး အိမ်ကွင်းမှာ (၃) မှတ်ရယူကာ အဆင့် (၈) နေရာသို့ တက်လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီနိုင်ပွဲကြောင့် စပါးစ်အသင်းဟာ မြို့ခံပြိုင်ဘက် အာဆင်နယ်အသင်းကို (၂) မှတ်ဖြတ်ထားနိုင်ခဲ့ပြီး အာဆင်နယ်အထက်မှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်သည့် မြို့ခံပြိုင်ဘက်များဖြစ်သည့်အလျောက် စပါးစ်အသင်းရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ အာဆင်နယ်အသင်း၏ အထက်မှာ ရပ်တည်နေနိုင်ဖို့ မဟုတ်ကြောင်း စပါးစ်နည်းပြ မော်ရင်ဟိုက ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။ လွန်လေပြီးသော အတိတ်မှာတုန်းက အာဆင်နယ်အသင်းဟာ စပါးစ်အသင်းအပေါ်မှာ ဆယ်စုနှစ်ခုကြာ လွှမ်းမိုးထားနိုင်ခဲ့သော်လည်း မျက်မှောက်ကာလမှာတော့ စပါးစ်အသင်းရဲ့ ပြန်လည်လွှမ်းမိုးမှုကို အမြှောက်တပ်သားကို ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး (၃) နှစ်ဆက်တိုက် စပါးစ်အသင်းဟာ အာဆင်နယ်အသင်းအထက်မှာ ရပ်တည်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ရအောင် စွမ်းဆောင်ထားပါတယ်။ မော်ရင်ဟိုကတော့ အာဆင်နယ်အသင်းအထက်မှာ ရပ်တည်နိုင်ရုံဖြင့် အောင်မြင်မှုရမှာမဟုတ်သလို၊ သူတို့ရဲ့ အဓိက...
ရာထူးထိုင်ခုံ ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်သည့် ဘာစီလိုနာနည်းပြ #ဆက်တီယန်
စပိန်လာလီဂါဟာ ယခုနှစ်မှာ ချန်ပီယံဆုအတွက် အတော်လေး ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ ပွဲပြီးဖို့ (၆) ပွဲလောက်အလိုမှာတင် ထိပ်ဆုံး (၂) သင်းဖြစ်တဲ့ ဘာစီလိုနာ နဲ့ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်တို့ရဲ့ အမှတ်ကွာဟချက်ဟာ (၂) မှတ်သာ ကွာဟတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာအသင်းဟာ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ ဆယ်လ်တာဗီဂိုနဲ့ပွဲစဉ်မှာ သရေရလဒ်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာကြောင့် ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ (၂) မှတ်တိတိကွာဟသွားခဲ့ပြီး ချန်ပီယံဆုကို ထိန်းထားဖို့ ခက်ခဲလာခဲ့ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပွဲကျပ်တွေဆက်တိုက်ကစားထားရတဲ့ ဘာစီလိုနာအသင်းအနေနဲ့ ယနေ့ညမှာလည်း အေတီကိုမက်ဒရစ်ကို အဝေးကွင်းမှာ သွားရောက်ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အေတီကိုနဲ့ပွဲသာ မတော်တဆ အရေးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုပါက နည်းပြဆက်တီယန်ဟာ ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ခံရတော့မယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီပွဲရလဒ်ဟာ ဆက်တီယန်အတွက်တော့ အတော်လေး အရေးပါတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ဖိအားတွေလည်း များနေလောက်ပါပြီ။ ဆက်တီယန်ဟာ ဘာကာကစားသမားတွေနဲ့ နည်းဗျူဟာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ ကွဲလွဲချက်များရှိနေပြီး အချေအတင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘာကာကြယ်ပွင့် မက်ဆီ နဲ့...
Categories La Liga	Comments: 0
ယူနိုက်တက်က စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ကို အသင်းမှာသာ ဆက်နေဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သည့် လက်စတာစီးတီးနည်းပြ ရော်ဂျာ
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှားဟာ ဂျိမ်းစ်မက်ဒီဆင်ကို ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ဝင်စားနေခဲ့တာကြာပါပြီ။ အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် မက်ဒီဆင်ဟာ နောဝစ်ချ်စီးတီးမှ လက်စတာစီးတီးအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီး အင်္ဂလန်ရဲ့ အထွန်းတောက်ဆုံး ကြယ်တစ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာ ပေါ့ဂ်ဘာမရှိတော့တဲ့ ကွင်းလယ်ပိုင်းကို တာဝန်ယူဖို့အတွက် မက်ဒီဆင်ကို မျက်စိကျလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်စတာစီးတီးနည်းပြ ဘရန်ဒန်ရော်ဂျာကတော့ မက်ဒီဆင်ကို အသင်းမှာ ကာလကြာရှည်စွာ ဆက်ရှိနေဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပြီး၊ အသင်းနှင့် အောင်မြင်မှုများစွာ ရယူသွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ “ဂျိမ်းစ်က ကျွန်တော့်တို့အတွက်တော့ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ သူရဲ့ တိုးတက်မှုကို ဒီမှာပဲ ကျွန်တော်မြင်နေရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ ထရိန်နင်းစင်တာကို ပြောင်းရွှေ့ပြီးရင် သူ့မှာ လိုအပ်နေတဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကောင်းကောင်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဒီထက်ပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်ချင်တဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်လက်ထက်မှာတော့ မက်ဒီဆင်ဟာ ခြေစွမ်းအရရော၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအပိုင်းမှာပါ တိုးတက်လာတယ်လို့ ခံစားမိတယ်။...
စပါးစ်နဲ့ ပွဲမှာ သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးရအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ပေ့ါဂ်ဘာကို ချီးကျူးသွားခဲ့သည့် နောက်ခံလူ #လုခ်ရှော
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ဘယ်နောက်ခံလူ လုခ်ရှောက စပါးစ်နဲ့ ပွဲမှာ နာရီဝက်နီးပါး ဝင်ရောက် ကစားပေးခဲ့သော ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဂ်ဘာ၏ ခြေစွမ်းကို အားပါးတရချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ ပွဲချိန် ၆၃ မိနစ်မှာ ဘရာဇီးလ်သား ဖရက်ဒ်၏ နေရာတွင်လူစားလဲဝင်ရောက်ကစားခဲ့ပါတယ်။ ပွဲချိန် မိနစ် ၈၀အရောက်မှာတော့ စပါးစ်နောက်ခံလူ အဲရစ်ဒိုင်ယာဟာ ပေ့ါဂ်ဘာကို ဧရိယာအတွင်း နောက်မှ တွန်းလဲှချခဲ့သည့်အတွက် ဒိုင်လူကြီးက ပင်နယ်တီသတ်မှတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါပင်နယ်တီကို ဖာနန်ဒက်စ်က အမှားအယွင်းမရှိကန်သွင်းပြီး ယူနိုက်တက်အတွက် အဖိုးတန်သရေတစ်မှတ်ကို ရယူပေးခဲ့ပါတယ်။ ပေါ့ဂ်ဘာဟာ လက်ရှိရာသီမှာ ဒဏ်ရာကြောင့် ကစားခွင့်တွေပျောက်ဆုံးနေပြီး ရုန်းကန်နေရပါတယ်။ ဘောက်ဆင်ဒေးပွဲစဉ်ပြီးကတည်းက ခြေကျင်းဝတ်ဒဏ်ရာကြောင့် အချိန်ကာလအတန်ကြာအနားယူခဲ့ရပြီး ပြီးခဲ့သည့်သောကြာနေ့ညမှ ပြန်လည်ပါဝင်ကစားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ကစားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလည်း ပေါ့ဂ်ဘာဟာ သူ့တာဝန်သူကြေအောင် အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ခဲ့သလို၊ နည်းပြဆိုးလ်ရှားနှင့်တကွ လုခ်ရှောက သူ၏ ခြေစွမ်းအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန်ချီးကျူးသွားခဲ့ပါတယ်။ “ဒီနေ့ပွဲမှာ သူလုပ်သွားခဲ့တဲ့ ကွဲပြားခြားမှုတစ်ခုကို ပွဲအပြီးမှာ သူ့ကို...
အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်သူ အီဒူးက နည်းပြ အာတီတာအနေဖြင့် ကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတိုင်းမှာ မဖြစ်မနေပါဝင်လှုပ်ရှားရမည့်တာဝန်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အာတီတာဟာ သူ့အသင်းရဲ့ ကစားသမားစာရင်းကို လာမည့်ရာသီအနည်းငယ်အတွင်း ကြီးကြီးမားမားပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်သွားဖို့ရှိသလို၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အနေအထားကို အဆုံးသတ်သွားဖု့ိ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စတိုင်းမှာတော့ အဓိက ဦးဆောင်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ Head Of Football ရာထူးယူထားတဲ့ ရာအူးလ်ဆန်နလီဟီ နဲ့အတူ ဦးဆောင်ညှိ့နှိုင်းရေးမှူး ဟက်စ်ဖာမီဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ် ၂ ယောက်နှင့်အတူ တွဲဖက် လှုပ်ရှားသွားမှာကတော့ အားကစားဒါရိုက်တာ အီဒူးနှင့် နည်းပြ အာတီတာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်းအရွှေ့ကိစ္စမှာ အာတီတာရဲ့ လုပ်ကွက်တစ်ခုကတော့ သူလိုချင်တဲ့ ကစားသမားကို ပြောပြခြင်း၊ သို့မဟုတ် သူလိုအပ်နေတဲ့ နေရာအတွက် ခေါ်ယူသင့်တဲ့ ကစားသမားစာရင်းကို ပေးပို့ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလို အီဒူးကိုယ်တိုင် ထုတ်ပြောရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းကတော့ အာတီတာဟာ လူခေါ်ယူမှုအပိုင်းမှာ အာဏာသက်ရောက်မှုရှိစေတယ်ဆိုတာကို သိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်။...
အိမ်ကွင်း ပရိသတ်တွေထံကို ဘီယာ နှင့် ပိုင်မုန့်များ အိမ်တိုင်ရာရောက် အလှူဒါနပြုလုပ်ခဲ့သည့် ဘရိုက်တန်
ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ် ဘရိုက်တန်အသင်းဟာ ပရိသတ်တွေအပေါ်မှာ နွေးထွေးမှုကိုပြသော သဘောဖြင့် ပိုင်မုန့်များနှင့် Sussex-based Harvey ဘီယာ ၅ လီတာကို အိမ်တိုင်ရာရောက် လိုက်လံ လှူဒါန်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ ပထမဦးဆုံး အိမ်တိုင်ရာရောက် လှူဒါန်းမျှဝေသည့် ပထမဦးဆုံးအသင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလိုလှူဒါန်းမည့် အတွေးကိုတော့ အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုများမှ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘောလုံးကွင်းထဲမှာရောင်းတဲ့ ပိုင်မုန့် အနံ့အရသာတိုင်းကို ပရိသတ်များခံစားမိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပရိသတ်များအနေဖြင့် Apex ဘောလုံးကွင်းထဲမှာလည်း အဆိုပါပိုင်မုန့်ကို အလွယ်တကူဝယ်ယူသုံးဆောင်ခွင့်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလှူဒါန်းမှုအပြီးမှာတော့ လာမည့် စနေနေ့မှာ ကစားမည့် အာဆင်နယ်နှင့် အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာ နောက်ထပ် အစီအစဉ်များကို ထပ်မံမိတ်ဆက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ လိဂ်ဝမ်း နှင့် လိဂ်တူး ကလပ်များဖြစ်သည့် ဝိုင်ကွန်ဘီ နှင့် နော်သမ်တန်အသင်းတို့ကလည်း ဘရိုက်တန်းနည်းတူ သူတို့ရဲ့ Play-Off ပွဲစဉ်များမတိုင်ခင် အိမ်ကွင်းပရိသတ်များအား အစားအသောက်များ ဝေဌခြင်း၊ ကစားသမားဟောင်းများနှင့်...
အကြံပိုင်တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်!!! ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေအရ အလွတ်ကြေးနဲ့ ရထားတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ထုတ်ရောင်းမည်
ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့် ရင်ဆိုင်လာနိုင်သည့် အီတလီထိပ်တန်းကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ်ဟာ အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ကို ထုတ်ရောင်းဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဘောလုံးလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာ ကိုဗစ်-၁၉ ကြောင့် အခက်တွေ့နေရသလို၊ ဘောလုံးပွဲများအားလုံးကိုလည်း ပရိသတ်မပါပဲ ကစားရမည့်အတွက်ကြောင့် ကွင်းဝင်ကြေးတွေ ဆုံးရှုံးရဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကလည်း ကစားသမားလစာပေးချေရမဲ့ ကိစ္စရှိနေတာကြောင့် ဘဏ္ဍာရေးချောင်လည်စေဖို့အတွက် ကစားသမားများကို ထုတ်ရောင်းဖို့ ဟန်ပြင်နေပါပြီ။ Sportmail ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ ရမ်ဆေးကို ခေါ်ယူလို့ရနိုင်တဲ့အကြောင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်း ၂သင်းထံ အချက်ပြထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရမ်ဆေးဟာ ယခုရာသီအစမှာ အာဆင်နယ်အသင်းမှ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းသို့ အလွတ်ကြေးဖြင့် ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့သော်လည်း ပုံမှန်ကစားခွင့်မရပါဘူး။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက် စုစုပေါင်း ၉ ပွဲသာ စတင်ကစားခွင့်ရပါတယ်။ ရမ်ဆေးရဲ့ အပြောင်းအရွှေ့မှာ အဓိကအဟန့်အတားဖြစ်စေမဲ့ အကြောင်းအရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ လစာငွေဖြစ်ပါတယ်။ ရမ်ဆေးဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်မှာ တပတ်ကို ပေါင် ၄...
Categories Series A	Comments: 0